2018 iPhone အသစ်မှာ ဘယ်လိုကင်မရာမျိုး တပ်ဆင်လာမလဲ ? – Myanmar Mobile App
2018 iPhone အသစ်မှာ ဘယ်လိုကင်မရာမျိုး တပ်ဆင်လာမလဲ ?
Posted on August 4, 2018 Author jacksonsoemoe	Comment(0)
Apple ကနေ2018 ခုနှစ်အတွက် iPhone ၃လုံးထွက်ဖို့ရှိပြီး second-generation iPhone X ဆိုရင် 5.8 inch OLED display, iPhone X Plus ကတော့ 6.5 inch OLED display နဲ့ LCD display ကိုမှ full screen 6.1 inch display (iPhone X ဒီဇိုင်းလို) တွေကိုသုံး ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။
2018 iPhone တွေအတွက် ကင်မရာပိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးခန့်မှန်းရတာကတော့ dual camera စနစ်သုံးလာမယ် ဆိုတာပါ။ ပုံမှန် 12MP ƒ/1.8 နဲ့အတူ ƒ/2.4 telephoto ကိုသုံးလာနိုင်ပြီး dual optical image stabilization ထောက်ပံ့လာနိုင်ပါတယ်။ flash ပိုင်းအတွက်ကိုတော့ Quad-LED True Tone တွဲဖက်သုံးလာနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် 6.1-inch ဖုန်းမှာတော့ iPhone 8 မှာလိုမျိုး ကင်မရာတစ်လုံးသာ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Forbes ကလာ တဲ့ သတင်းတွေမှာတော့ 6.5-inch iPhone မှာ triple lens setup သုံးလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆင်ဆာ၃ခုမှာ wide-angle ၊ telephoto lens နဲ့အတူ monochrome sensor ဆိုပြီး ပေါင်းထည့်ပေးထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ iPhone camera lenses တွေကို Sony ကထောက်ပံ့မှာကြောင့် ဒီနှစ်ထုတ်ဖုန်းတွေမှာ IMX586 တောင်သုံးလာနိုင်ပါတယ်။
iOS 12 မှာပါဝင်လာတဲ့ Group FaceTime လုပ်ဆောင်သစ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ဖို့ 12MP Selfie ကင်မရာသုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းတွေအရ 5.8လက်မ(Dual Lens) , 6.1 လက်မ (single Lens ) နဲ့ 6.5 လက်မ (Triple Lens ) လို့ အကြမ်းမျဉ်းခန့်မှန်း ထားပါတယ်။
Apple ကနေ2018 ခုနှဈအတှကျ iPhone ၃လုံးထှကျဖို့ရှိပွီး second-generation iPhone X ဆိုရငျ 5.8 inch OLED display, iPhone X Plus ကတော့ 6.5 inch OLED display နဲ့ LCD display ကိုမှ full screen 6.1 inch display (iPhone X ဒီဇိုငျးလို) တှကေိုသုံး ထားမှာဖွဈတယျလို့ သတငျးရထားပါတယျ။
2018 iPhone တှအေတှကျ ကငျမရာပိုငျးအတှကျ အနိမျ့ဆုံးခနျ့မှနျးရတာကတော့ dual camera စနဈသုံးလာမယျ ဆိုတာပါ။ ပုံမှနျ 12MP ƒ/1.8 နဲ့အတူ ƒ/2.4 telephoto ကိုသုံးလာနိုငျပွီး dual optical image stabilization ထောကျပံ့လာနိုငျပါတယျ။ flash ပိုငျးအတှကျကိုတော့ Quad-LED True Tone တှဲဖကျသုံးလာနိုငျခွေ ရှိပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ 6.1-inch ဖုနျးမှာတော့ iPhone 8 မှာလိုမြိုး ကငျမရာတဈလုံးသာ တပျဆငျပေးနိုငျပါတယျ။
Forbes ကလာ တဲ့ သတငျးတှမှောတော့ 6.5-inch iPhone မှာ triple lens setup သုံးလာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆငျဆာ၃ခုမှာ wide-angle ၊ telephoto lens နဲ့အတူ monochrome sensor ဆိုပွီး ပေါငျးထညျ့ပေးထားမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ iPhone camera lenses တှကေို Sony ကထောကျပံ့မှာကွောငျ့ ဒီနှဈထုတျဖုနျးတှမှော IMX586 တောငျသုံးလာနိုငျပါတယျ။
iOS 12 မှာပါဝငျလာတဲ့ Group FaceTime လုပျဆောငျသဈကို အကောငျးဆုံး အသုံးခနြိုငျဖို့ 12MP Selfie ကငျမရာသုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ သတငျးတှအေရ 5.8လကျမ(Dual Lens) , 6.1 လကျမ (single Lens ) နဲ့ 6.5 လကျမ (Triple Lens ) လို့ အကွမျးမဉျြးခနျ့မှနျး ထားပါတယျ။
Samsung က Galaxy Note series နဲ့ S Plus device တွေအတွက်ကို ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချရန်ရှိ
Posted on July 21, 2018 Author Swe Yee Latt
Zawgyi version Samsung ရဲ့ Galaxy Note series တွေက ကုန်ကျစရိတ်တွေက မသက်သာပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ S Pen ပါရှိတာရယ်၊ ကြီးမားတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ display screen တွေကြောင့် သူ့ကုန်ကျစရိတ်က ကြီးမားလှပါတယ်။ ခု Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Galaxy Note 8 နဲ့ Galaxy S9+ ရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ခြားနားချက်ကတော့ S Pen ပါဝင်ခြင်း မပါဝင်ခြင်းပါပဲ။Samsung က သူ့ရဲ့ flagship စမတ်ဖုန်းတွေထံကနေ အမြတ်များများရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ Samsung ကတော့ Galaxy Note9ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက Note နဲ့ […]
သင့် အိုင်ဖုန်း ဘက်ထရီ ကို ဘယ်အချိန်မှာ လဲလှယ်သင့်သလဲ
Apple ဖုန်းများဟာသက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ချို့ယွင်းမှုများကိုလျော့ချနိုင်ရန် ဖုန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှေးကွေးစေသည်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းများထွက်ရှိနေသည်ကို သင်လည်းသတိထားမိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြိုတင်ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဖုန်းဟာအမှန်တကယ်ပဲ သက်တမ်းကြာပါသည်နှင့်အမျှ နှေးကွေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple အနေနဲ့မိမိဖုန်းအသုံးပြုသူများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဇန်န၀ါရီလနှောင်းပိုင်းမှစပြီး သူတို့၏ဖုန်းဘတ္တရီဟောင်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ရာတွင် ဈေးနှုန်းလျော့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပြီး ဘတ္တရီသစ်များဖြင့် ဖုန်းမော်ဒယ်ဟောင်းများကို ဆက်လက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ Mirror မှသတင်းအရင်းအမြစ်အရ iPhone6နှင့်အထက်မော်ဒယ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၂၅ပေါင်နှုန်းဖြင့် ဘတ္တရီအစားထိုး လဲလှယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်ဖုန်းဘတ္တရီ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေကို အမြဲတမ်းသတိထားမိနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖုန်းရုတ်တရက်ပိတ်သွားခြင်းမျိုးမှာ ဖုန်းတွင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် မလိုအပ်ဘဲပိုက်ဆံများထုတ်သုံးလိုက်ရမည့်အစား သင့်ဖုန်းဘတ္တရီသက်တမ်း မည်မျှကျန်သေးသည်ကို လွယ်ကူစွာသိနိုင်မည့်အရာနှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ZDNet မှ Adrian Kingsley-Hughes မှဖော်ပြချက်အရ ပထမဆုံးပြုလုပ်ရမှာကတော့ ၀.၉၉ဒေါ်လာဖြင့် CPU DasherX application ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါ။ အဆိုပါ […]
Posted on June 14, 2018 Author jacksonsoemoe
လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလတုန်းက တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Meizu အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ၁၅နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Meizu 15 စီးရီးဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းတွေဟာ ဈေးကွက်ထဲမှာ ထင်မှတ်ထားသလောက်လူကြိုက်များခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Meizu 15 စီးရီးတွေရဲ့ ရောင်းချမှုပမာဏဟာ အရမ်းကိုနည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Meizu အနေနဲ့ နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်း စီးရီးသစ်တစ်ခုကို ဈေးကွက်ထဲကို ထပ်မံမိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားလျက်ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းကတော့ Meizu 16 စီးရီးဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ဖုန်းအသစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Meizu 16 စမတ်ဖုန်းဟာ Samsung ရဲ့ Galaxy S9 ဖုန်းနဲ့အတော်လေး ဆင်တူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့မှာ full view curved display ကိုသုံးထားပြီးဖုန်းရဲ့ထိပ်ဘက်မှာ […]
Essential ဖုန်းပုံစံ Notch အသေးလေးနဲ့ Xiaomi Mi9ရဲ့ Concept ဒီဇိုင်းထွက်လာ
Huawei က Lily White Honor 10 GT ကို ကြေညာ